NATAHOTRA NY SEMPAMA NY EMMO – MyDago.com aime Madagascar
NATAHOTRA NY SEMPAMA NY EMMO
Andro faharoa amin’ny fidinana an-dalambe notanterahan’ny Sendikan’ny Mpampianatra eto Madagasikara na SEMPAMA androany. Omaly izy ireo no nanomboka nanao ny fidinana an-dalambe niainga teo anoloan’ny Ministeran’ny fanambeazam-pirenena Anosy ka nihazo teo anoloan’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena, ary avy eo niverina teny anoloan’ny ministera ihany. Mbola notohizan’ireto SEMPAMA ireto, izany hetsika fidinana an-dalambe izany androany. Mitovy tamin’ny andro omaly dia niainga teo anoloan’ny Ministeran’ny fanambeazam-pirenena, ny hetsika , nandalo ny Tunel Ambohidahy, ary nihazo teny anoloan’ny Banky Bni Analakely, ka saika hankany amin’ny Cisco Analakely izy ireo androany. Niova indray anefa izany rehefa teny akaikin’ny kianjan’ny 13 Mai satria efa tsy tratra tao intsony ny tomponandraikitra. Nanapa-kevitra ny SEMPAMA fa hiverina any Anosy indray hamarana ny hetsika, ka nizotra tamin’ilay lalana naleha teo. Horakoraka sy hirahira milaza ny fitakian’izy ireo, ary miaraka amin’ny filanjana soram-baventy izay misy soratra hoe : SEMPAMA « tsy manaiky ny atao vatolampy mandondona hitangenan’ny vorona intsony isika » no nentin’izy ireo nandritra izany. Lava dia lava ny filaharana satria anisan’ny tonga nanatevin-daharana ny hetsika ny solontenan’ny SEMPAMA avy any amin’ny faritra manerana ny Nosy. Araka ny nambaran’ny filohan’ny SEMPAMA Andriamatoa Claude dia ala nenina no nanaovana iny hetsika iny. Tao anatin’ny telo volana nanatontosana ny fitakiana hoy izy dia efa tapitra notetezina avokoa ny ambaratongam-pahefana kanefa tsy nisy valiny ireo fitakiana ireo.Rehefa izahay hoy Claude no mitaky tsy omena fa rehefa ny miaramila dia mahazo. Mikasika ny vola 5alina ariary nomeny fat dia nambarany fa fanambatambazana fotsiny ny mpampianatra izany fa tsy mamaly ny fitakiana.Nanambara ireto mpampianatra ireto fa tsy misy fanadinana mandeha izany eto,ary olona nokaramaina izay tsy mahafantatra akory ny resaka fanabeazana no hampanaovina ny fanadinana ara-panatanjahantena ankehitriny.NItaky ny fialan’ny ministra Manoro Régis izy ireo Rahampitso dia hivory ny birao nasionaly miaraka amin’ny solontenan’ny faritra hanapaka ny mety ho tohin’ny hetsika fitakiana. Mbola hifamotoana eny Anosy ihany izy ireo ny Alatsinainy ka eny no hofantatra izany fanapahan-kevitra izany, ho an’ireo mpampianatra rehetra. Marihina fa tao anatin’ny filaminana no nanatontosan’ny SEMPAMA ny hetsika fidinana an-dalambe. Fiara tsy mataho-dalana iray feno miaramila no nanaraka taty afara ny mpanao fihetsiketsehana. Tsy sahy nidaroka lakrimozena izy ireo na dia nibahana ny arabe aza ireto mpampianatra ireto. Amin’ny ankapobeny dia natahotra ny SEMPAMA ny Emmonat.
5 réflexions sur « NATAHOTRA NY SEMPAMA NY EMMO »
tena mahay organisation ireto fa tsy karaha free fm sy dadafils
Tsy efa feno ve izay ny paosy ry domelina sy ny forongony à ? Mitampina ve ny mason’ireo mpanaraka azy ireo ? Ary ireo fotaka be galona manao polifika ?Hisy farany jiaby ny zavadrehetra fa tandremo.
Tandremana dia tandremana tokoa izao ny ny finonoam-poana izay aretina mahazo ny Malagasy maro. Raha mino ny SEMPAMA fa hanome izay nangatahiny ny FAT ? dia izay fa ho tapitra hatreo ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny hetsika tsy tokony hijanona mihitsy raha tsy efa eo am-pela-tanan’ny SEMPANA ireo fangatahiny. Ary tena tanteraka izany, ohatra: ny fialan’ny minisitry ny fanabeazana Manoro Regis.
Fitakiana sendikaly ireo ry lazalazao fa ny zavatra tsy azo tam de8 no takiany am zandry ary toa efa nomeny zandry aza fa tsy afa-po ny sasany. Diso be ianao raha hanantena hoe hiaraka aminareo ireo.
Ny tian’i Tanora ho lazaina izany dia le SEMPANA miaraka @ LOSOFERA DOMELINA ?
Précédent Article précédent : HANDATSAM-BATO HO AN’I DADA ny etsy amin’ny Magro rahampitso !
Suivant Article suivant : Rolland RAVATOMANGA : « fotoana famondronan-kery izao »